The OnePlus 7 Pro Almond Edition ayaa hadda laga iibsan karaa Spain | Androidsis
The OnePlus 7 Pro Almond Edition ayaa hadda laga heli karaa Spain
Dhowr usbuuc ka hor OnePlus 7 Pro ayaa lagu bilaabay midab cusub gudaha Hindiya. Wax yar kadib markaan ogaannay taas waxay ahayd mid kooban oo heer sare ah ee nooca Shiinaha, kaas oo lagu bilaabay magaca Almond Edition, iyadoo la tixraacayo midabkiisa. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa la xaqiijiyay daahfurka noocaan si rasmi ah Spain, oo ugu dambeyn maanta dhacay.
Sidaa darteed, isticmaaleyaasha xiiseynaya, hadda waxaa lagu sameyn karaa Hal-ku-dheggan OnePlus 7 Pro Almond Edition si rasmi ah Spain. Hordhac muhiim ah, maxaa yeelay Waa nooc xaddidan oo taleefankan nooca Shiinaha ah. Marka waa laga yaabaa inay dhamaato.
Kuwa xiiseynaya iibsashadiisa waxay u adeegsan karaan laba ikhtiyaar The OnePlus 7 Pro Almond Edition ayaa lagu bilaabay bogga rasmiga ee soo saaraha. Marka si toos ah ayaa looga iibsan karaa websaydhka. Maxaa intaa ka badan, Sidoo kale waa macquul inaad ka iibsato MediaMarkt, labadaba boggeeda internetka iyo dukaamada.
Sida la shaaciyey dhowr toddobaad ka hor, taleefanka waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 759 euro wadankeena. Waa nooc kaliya oo aan ka helno kiiskan, oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Marka ma dooran karno dareenkan.
Shaki la'aan, waa daahfuritaan xiisaha isticmaalayaasha. Marka waa inaan aragnaa soo dhaweynta ay daabacaaddan gaarka ah ee OnePlus 7 Pro ku leedahay Spain. Waagii hore, daabacadaha xaddidan ee dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ayaa si aad u wanaagsan loo iibiyay, anigoo si dhakhso leh u daalay cutubyo badan.
Sidaa darteed, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko haddii kan OnePlus 7 Pro Almond Edition uu sidoo kale si fiican u iibiyo kiiska Spain. Calaamadda Shiinaha ayaa kordhisay joogitaankeeda suuqa, wax si dhab ah u caawiya. Maxaa intaa ka badan, dhamaadka-sare ayaa lagu bilaabay illaa iyo hadda hal midab, sidaa darteed haysashada bedelkeed waa wax waliba abuuraya xiisaha kiiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » The OnePlus 7 Pro Almond Edition ayaa hadda laga heli karaa Spain
Samsung waxay ku shaqeyneysaa taleefan casri ah oo toos ah oo laablaaban 2020
Sawirada sanduuqa tafaariiqda ee Xiaomi Mi CC9 ayaa soo ifbaxday